Dhismayaasha Sare U kaca - Shiinaha Zhenyuan Qaabdhismeedka Birta Injineerinka Co., Ltd.
Dhismaha qaabdhismeedka birtu waa nooc cusub oo nidaam dhisme ah, kaas oo furaya soohdimaha warshadaha ee ka dhexeeyo warshadaha guryaha, warshadaha dhismaha iyo warshadaha metallurgy-ga oo ku milmaya nidaam warshadeed cusub. Tani waa nidaamka dhismaha qaab dhismeedka birta ee guud ahaan ay doorbidaan warshadaha.
Marka loo barbardhigo dhismayaasha shubka caadiga ah, dhismayaasha qaabdhismeedka birta waxay ku beddelaan shubka la xoojiyey taarikada birta ah ama birta qaybta, taas oo leh awood sare iyo adkeysi dhul gariir wanaagsan. Sababtoo ah qaybaha ayaa lagu soo saari karaa warshad laguna rakibi karaa goobta, muddada dhismaha si weyn ayaa loo dhimay. Sababtoo ah dib-u-isticmaalidda birta, qashinka dhismaha si weyn ayaa loo dhimi karaa waana ka cagaaran yahay iyodeeggaanka u fiican, sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa dhismayaasha warshadaha iyo dhismayaasha madaniga ah ee adduunka oo idil. Waqtigaan la joogo, codsiga dhismayaasha qaabdhismeedka biraha ee dabaqyada dhaadheer iyo kuwa aadka u sarreeya ayaa sii kordhaya oo si tartiib tartiib ah u noqonaya tiknoolajiyada dhismaha ee caadiga ah, taas oo ah jihada horumarka ee dhismooyinka mustaqbalka.
Dhismaha qaabdhismeedka birta waa qaab dhismeed culeys qaad ah oo ka sameysan bir bir ah. Alwaaxyada, tiirarka, guntimaha iyo waxyaabo kale oo sida caadiga ah ka samaysan birta birta iyo taarikada birta ah waxay sameeyaan qaab xamuul xambaarsan. Waxay ka kooban tahay dhisme dhammaystiran oo ay weheliyaan saqafka, sagxadda, gidaarka iyo dhismayaasha kale ee xayndaabka ah.
Birta qaybta dhismaha badanaa waxay tixraacdaa birta xagasha duuban ee kulul, birta kanaalka, I-beam, H-beam iyo biibiile bir ah. Dhismayaasha leh qaababka xamuulka qaada oo ka kooban waxyaabaha ay ka kooban yihiin waxaa loo yaqaan dhismayaal qaab-dhismeed bir ah. Intaas waxaa sii dheer, taarikada birta ah ee darbiyada khafiifka ah leh sida L-qaabeeya, qaabeeya U, qaabeeya Z iyo tubular, kuwaas oo qabow laga soo rogay taarikada birta khafiifka ah oo la jarjaray ama aan la jeexjeexin, iyo dhismayaasha qaabdhismeedka xamuulka qaada ee ay sameeyeen iyo qaybaha ay sameeyeen taarikada birta yar yar sida birta xagasha iyo baararka birta guud ahaan waxaa loo yaqaan dhismayaasha qaabdhismeedka birta fudud. Waxa kale oo jira qaabab fiilooyin ah oo la laalay oo leh fiilooyin bir ah, kuwaas oo iyaguna ah qaabab bir ah.
Birtu waxay leedahay awood sare iyo qaab dhismeedka laastikada, shey isku mid ah, baaxad wanaagsan iyo adkeyn, saxsanaanta sare, rakibo habboon, heer sare oo warshadeyn iyo dhisme dhakhso leh.
Horumarinta xilliyada, oo ka mid ah teknoolojiyada iyo qalabka jira, qaabdhismeedka birta, oo ah qaab dhismeed culeys xambaarsan dhismayaasha, wuxuu muddo dheer ahaa mid qumman oo qaan gaar ah, wuxuuna muddo dheer ahaa qalab dhisme ku habboon.
Dhismayaasha kor u dhaafaya tiro dabaqyo ah ama dherer ah ayaa noqon doona dhismooyin dhaadheer. Dhererka barta bilowga ama tirada dabaqyada dhismayaasha dhaadheer way ku kala duwan yihiin waddan ilaa waddan, mana jiraan heerar iyo heer adag oo adag.
Intooda badan waxaa loo isticmaalaa hudheelada, dhismooyinka xafiisyada, suuqyada laga dukaameysto iyo dhismayaasha kale.
Isbitaalka Hooyada iyo Dhallaanka
Dhismaha Dhismaha Jaamacada